Faransiiska oo dadka aan canshuurta bixin ka baadigoobaya baraha bulshada - BBC News Somali
Faransiiska oo dadka aan canshuurta bixin ka baadigoobaya baraha bulshada
28 Disembar 2019
Baraha bulshada ayaa baaritaan lagu sameyn karaa si xog looga helo
Dowladda Faransiiska ayaa haatan ku dhaqaaqi karta qorshaheeda ah inay dabagasho baraha bulshada si wax looga ogaado dadka khiyaanada ku sameeya canshuurta, sida ay xukmisay maxkamadda adstuuriga ah ee dalkaas.
Saraakiisha waaxda canshuuraha ayaa haatan loo oggolaaday inay qiimeeyaan cinwaannada, qoraallada iyo sawirrada ay soo dhigaan dadka dalkaasi ku nool ee baraha bulshada isticmaala, si wax looga ogaado dakhliga soo gala ee ay qariyaan.
Shuruucda cusub ayaa qeyb ka ah sharci toddobaadkii hore la meel mariyay oo ku saabsan canshuurta.
Kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha iyo waaxda dhowrista xogta dadka ee Faransiiska ayaase tallaabadan walaac ka muujiyay. Maxkamadda ayaa sidoo kale garwaaqsatay sida ay tallaabadan u dhaawici karto xorriyadda dadka.
Waxay sheegtay in xukuumaddu ay hubin doonto in keliya la baaro xogta sida shaaca ah loo soo dhigay baraha bulshada, ee aan la jabsan fure-sireedyada akoonnada dadka.
Google iyo Apple oo hawada ka saaray Barta ToTok
Maxkamadda ayaa sidoo kale sheegtay in sidoo kale lala socon doono sida xogtaas loo isticmaalayo.
Xog ururintan ballaaran ayaa qeyb ka ah tijaabo saddex sano socotay oo baraha bulshada lagula socday, taas oo ay sameysay dowladda Faransiiska waxaana la sheegay inay sare u qaadi doonto awoodda la socoshada baraha bulshada ee dalkaas.
Waaxda dhowrista xogta ee Faransiiska CNIL ayaa sheegtay inay garwaaqsan tahay in ujeeddada dowladda ay tahay mid macquul ah balse waxay xustay inay siyaasadda cusub ay khatar gelin karto xorriyadda dadka.
Tacaddiyadii dhacay xilligii Cabdi Maxamuud Cumar oo dacwado laga soo oogayo
Afduubka gabdhaha: "Mayd iyo nolol - ha la ii keeno gabadheyda"
18 Juunyo 2021
Maxaa loo jarayaa lacagihii la siin jiray ciidammada Kenya ee ku sugan Soomaaliya?
Kim Jong-un: Waxaan diyaar u ahay 'Col iyo nabad'